प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७३ ०९:४५
भोजको टेबुलको सुरुमा स्याउ थियो । त्यसमा लेखिएको थियो ‘चाहिनेभन्दा बढी नलेऊ, अरूले नदेखे पनि ईश्वरले हेरिरहेका छन् ।’
टेबुलको अन्त्यमा लड्डु थियो । हरिले लड्डुको भाँडै उठायो ।)
श्याम : हरि, तैँले चाहिनेभन्दा बढी लड्डु लिइस्, ईश्वरले हेरिराखेका छन् ।
हरि : ईश्वरले स्याउ पो हेर्दै छन् त । लड्डु हो र ?
छोरा : ममी, ममी एउटा टेस्टमा मेरो ए प्लस आएछ नि ?
ममी : कुन टेस्टमा ?
छोरा : ब्लड टेस्टमा ।
रोहन : हेर, साथी म त आफ्नो घरको भान्सामा जहिल्यै दूधका रित्ता कार्टुनहरू राख्ने गर्छु ।
सोहन : किन नि दूधका खाली कार्टुन ?
रोहन : ल, कहिलेकाहीँ ब्ल्याक टी खान मन लाग्यो भने दूध नहाली बनाउनुपर्‍यो नि ।